सेयर बजार इन्स्योरेन्स कम्पनीको कब्जामा, कारोबार रकम र परिसुचक दुबै उकालो - BizKhabar Online
सेयर बजार इन्स्योरेन्स कम्पनीको कब्जामा, कारोबार रकम र परिसुचक दुबै उकालो
काठमाडौं । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले कब्जा जमाएको छ । सोमबार बढी कारोबार हुने १० कम्पनीमध्ये ९ कम्पनीमा इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।
मंगलबार दिनभर उतारचढाव भएको बजार बन्द हुँदा १७ दशमलव ४२ अंकले बढेको बजारमा कारोबार रकम पनि बढ्न पुगेको छ । दोहोरो अंकले बृद्धि भएको बजारमा बीमा समुहको परिसुचक सबैभन्दा बढी २ सय ९३ अंकले उकालो लागेको छ । जसमा सबैजसो बीमा कम्पनीको परिसुचक उच्च रुपमा बढ्न पुगेका छन् ।
यसैगरी माइक्रोफाइनान्स समुहको परिसुचक ७२ अंकले बढ्दा फाइनान्स समुहको परिसुचक करिब १५ अंक र विकास बैंक समुहको परिसुचक १७ अंकले बढेको छ । तर, बजारमा बढि प्रभाव रहेको बैंकिङ समुहको परिसुचक भने सामान्य मात्र उकालो लागेको छ । बजारमा सबै समुहको परिसुचक बढ्दा अतिरिक्त समुहको परिसुचक भने घट्न पुगेको छ ।
अघिल्ला दिनमा घटेको कारोबार रकम सोमबार बढ्न पुगेको छ । सोमबार अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम झण्डै दोब्बरले बढ्दै ५७ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढेको छ । जसमा ३ बीमा कम्पनीको कारोबार २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिायो भने अन्य कम्पनीको सोभन्दा कम नै भएको छ । दिनभर कुल १ सय ६७ कम्पनीको ११ लाख ७८ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् ।
५३ करोडको कारोबार हुँदा ८ अंकले घट्यो नेप्से, नेपाल बैंक र लगानी कोषमा झुम्मिए लगानीकर्ता
नियम पालना नगर्ने ४ वटा क्यापिटललाई धितोपत्र बोर्डको कारबाही, पहिलोपटक तिरायो जरिवाना
राष्ट्र बैंकको टुल्सले काम नगरेपछि वियरिस ट्रेण्डमै नेप्से, कारोबार रकमले पनि छाड्यो साथ
साताको पहिलो दिन नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, कारोबार रकममा पनि संकुचन
अन्तत : आन्दोलनकारी लगानीकर्ताको अनसन तोडियो, जुस पिएपछि बढ्ला त बजार ?
हल्लैहल्लामा उकालो लाग्दै सेयर बजार, लगानीकर्ताहरुबीच दूरी बढ्दै
लगानीकर्ताले युजर नेम र पासवर्ड पाएसँगै दोहोरो अंकमा बढ्यो नेप्से, के होला लगानीकर्ताको आन्दोलन ?
अनसन बसेका लगानीकर्तालाई नेप्सेको राहत, बजार बन्द हुँदा दोहोरो अंकले बढ्यो परिसुचक